IMILINGANISELO YEGARAJI ESEMGANGATHWENI (1, 2, 3 & 4 UBUNGAKANANI BEGARAJI YEEMOTO) - IIGARAJI
Eyona Iigaraji Imilinganiselo yeGaraji esemgangathweni (1, 2, 3 & 4 Ubungakanani beGaraji yeemoto)
Imilinganiselo yeGaraji esemgangathweni (1, 2, 3 & 4 Ubungakanani beGaraji yeemoto)
Apha sabelana ngemilinganiselo esemgangathweni yegaraji kubandakanya i-1, 2, 3 & 4 ubukhulu begaraji zeemoto kunye nomndilili wokuphakama komgangatho.
Ngaba ufuna igaraji enkulu kangakanani? Xa usenza isigqibo sokuba yeyiphi eyona garaji ilungileyo kukho izinto ezimbalwa ekufuneka zithathelwe ingqalelo ukuze uqiniseke ukuba ulungile. Kuqala kufuneka siphendule imibuzo eliqela ukunceda ukunciphisa izinto eziyimfuneko.
Ubungakanani Bocango Lwegaraji
Ubungakanani beGaraji yemoto eyi-1
2 Imilinganiselo yeGaraji yeemoto
3 Imilinganiselo yeGaraji yeeMoto
4 Imilinganiselo yeGaraji yeemoto
Ukuphakama komgangatho weGaraji
Zingaphi iimoto onazo? Into yokuqala yokuthatha isigqibo ngobungakanani begaraji kukuba zingaphi iimoto ekufuneka zingaphakathi kuyo. Ngamanye amaxesha unokuba neemoto ezine kwaye ufuna ezimbini kuphela kwigaraji, njengoko ezinye ezimbini zinokuba sendleleni okanye esitratweni.
Gcina ukhumbula ukuba xa upaka kwigaraji kunye nokuhamba ngamanye amaxesha kunokuba nzima ukuyiqhuba xa enye imoto imisiwe ngasemva kwayo. Oku kunokuthetha ukuba kuya kufuneka uthathele ingqalelo iphedi yokuhamba okanye igaraji eyongezelelweyo kunye nendlela yokuqhuba ukulungiselela inani lezithuthi ezifuna ukuhamba yonke imihla. Kuya kufuneka ukuba uqwalasele iintlobo zeemoto onazo, njengeSUV okanye ilori eya kuthatha indawo enkulu.
Ngaba uya kuyisebenzisa igaraji yakho njengendawo yokusebenzela? Enye into yokuba igaraji ibe nkulu kangakanani ukuba sele ucwangcisile iimoto eziza kuba kwigaraji, uthini malunga nezinto? Ngaba sikhona isidingo sokusebenzisa igaraji njengendawo yokusebenzela, ukuba kunjalo kufuneka kubekho igumbi lezixhobo kunye nendawo yokusebenza ngokubanzi, kuxhomekeke kwiiprojekthi eziqhelekileyo ezenziweyo kwisithuba kunokuqhubeka ukugqiba isixa sendawo ekufuneka sinikezelwe indawo yokusebenzela.
ukuba nithini emtshatweni enkosi amakhadi
Ngaphezulu kwento leyo indawo inokusetyenziselwa unikezelo lwangaphandle okanye ukugcinwa kwefriji yokutya. Nokuba ziibhayisikile, izixhobo zemidlalo, ukugcinwa okongezelelekileyo kokutya okukuthiya igama, ngamanye amaxesha igaraji yeyona ndawo ifanelekileyo ukuba ifikeleleke ngokulula kunye nokugcina ivumba elibi okanye izinto ezimdaka ngaphandle kwekhaya. Eli ingalixesha elihle lokupaka iloli yomsebenzi omde kwindlela ekuhamba kuyo njengoko ingathinteli mntu upaka kwelinye icala legaraji.
Njengomgaqo ngokubanzi kubalulekile ukuba ushiye malunga neenyawo ezimbini ezinesiqingatha ukusuka emotweni uye kwinto ekufutshane, nokuba yeyenye imoto okanye udonga lwegaraji. Yiyo ke le nto ukuze iingcango zemoto zikwazi ukuvula kwaye ungaphuma kwisithuthi.
Kwiigaraji zemoto enye ubukhulu bayo bumalunga neenyawo ezili-12 ububanzi ngeenyawo ezingama-20 ubude, kunye umnyango wegaraji ububanzi mabube ziinyawo ezili-9. Oku kulingana nemoto ephakathi, ii-SUV kunye neelori kufuneka ziqinisekiswe kwaye ziqwalasele ukufumana umnyango omkhulu kunye negaraji ukulungiselela izithuthi ezikhulu.
Kwiigaraji zeemoto eziphindwe kabini ubungakanani ngokubanzi bumalunga ne-18-20 yeenyawo ububanzi ngeenyawo ezingama-20 ubude, kwaye ububanzi bomnyango kufuneka bube zii-9 iinyawo inye ukuba kuzakubakho iingcango ezimbini ezahlukileyo okanye i-16 yeenyawo ngokubanzi ukugubungela zombini izithuthi.
Qaphela ukuba iinyawo ezingama-20 ziyafana njani kwiigaraji zeemoto ezizodwa nezimbini. Kungenxa yokuba iimoto kufuneka zibekwe ecaleni kwenye kwezi meko kwaye imoto nganye ifuna kuphela iinyawo ezingama-20 zesithuba ngaphambili ngasemva.
Ezinye iigaraji zeendlela zinokubeka iimoto ezinje nge igaraji yemoto esecaleni . Kwimeko apho ubude buya kuphindwaphindwa, kodwa iigaraji ezixineneyo zinobuchwephesha obukhulu njengoko kunzima ukuqhuba izithuthi zingena ziphuma.
Enye into enokutshintsha iinyawo ezingama-20 ukuba kukho umnqweno wokongeza okungakumbi yokugcina igaraji . Ukongeza indawo phambi kweemoto ezimileyo kunokushiya isithuba semigqomo yenkunkuma, iibhegi zetyuwa, iifotsholo, okanye izihlangu zangaphandle ukuba iindawo ziyafuneka.
Kwiigaraji zeemoto eziphindwe kathathu ubukhulu ngokubanzi bumalunga neenyawo ezingama-31 ububanzi ngeenyawo ezingama-20 ubude, kwaye ububanzi bomnyango kufuneka bube zii-9 iinyawo inye ukuba kuya kubakho iminyango emithathu eyahlukeneyo okanye i-16 yeenyawo kunye neenyawo ezili-9 zokugubungela zonke izithuthi.
Akukho khetho oluqhelekileyo oluneemoto ezintathu ezinakho ukusebenzisa ucango olunye. Oku kwenza ukuba umnyango wegaraji ubanzi kakhulu kwaye ubenakho ukungasebenzi ngokuchanekileyo kwaye ulungile nangaphantsi kolwakhiwo. Kukho izinto zesiko ezinokwenziwa ngokobungakanani ukuba akukho nanye kwezi zinto unqwenela ukuba kwigaraji yakho.
Kwiigaraji zeemoto ezizodwa ubungakanani ngokubanzi bumalunga neenyawo ezili-12 ngeenyawo ezingama-20, kwaye ububanzi bomnyango kufuneka bube ziinyawo ezili-9 inye ukuba kuyakubakho iminyango emine eyahlukeneyo okanye iingcango ezimbini zeenyawo ezili-16 okanye indibaniselwano eyahlukeneyo ye-16 kunye ne-9 yokunyuswa kweenyawo. Iingcango kufuneka zivulwe ngokudibeneyo yeyiphi iminyango.
Umnyango ngamnye owahlukileyo ufuna isiqwenga sodonga esiyi-1,4 unyawo phakathi kwawo, lo mmandla ubangela indawo yokungena nokuphuma kwisithuthi kunye nazo naziphi na iziqwenga zombane okanye zesakhiwo ezifuna ukongezwa ukuze iingcango zegaraji zisebenze ngokufanelekileyo.
Imilinganiselo inokwahluka ngokuxhomekeke ekubeni unayo igaraji eqhotyoshelweyo okanye evalelweyo . Uyilo oluqhotyoshelweyo lwabelana ngophahla olufanayo njengekhaya kwaye ngokubanzi banegumbi elingaphantsi kweyunithi edibeneyo.
Ukuphakama komndilili womnyango wegaraji umalunga neenyawo ezisi-7, ngamanye amaxesha ziphakama ngokufana nodonga lwangaphakathi oluziimitha ezisi-8. Lo mmandla uhlala usekwe kwindawo yendlu. Iigaraji ezingafakwanga zihlala zihlala zii-7 ukuya kwi-8 iinyawo njengoko zingaxhomekekanga kuwo nawuphi na umba.
Xa igaraji igxunyekwe ekhayeni kwaye unocango lokudibanisa ukusuka ekhaya ukuya kwigaraji imigangatho yemigangatho yahlukile ngenxa yeziseko kunye namaqonga ahlukileyo kwigaraji nakwikhaya lonke.
Ngamanye amaxesha inqanaba lesibini liyaqhubeka ngaphezulu kwegaraji, konke ukuphakama okufanayo kwinqanaba lesibini. Oku kunokuthetha ukuba igaraji kufuneka ibe yinde kancinci ukulungiselela indawo ephantsi yomgangatho ukugcina umgangatho womgangatho ukuba inqanaba lesibini ngokufanayo.
Ukuba nophahla olude kunokuba yibhonasi eyongeziweyo yokugcina iibhayisikile enye irack ukusuka eluphahleni. Qiniseka xa ufaka iiracks zebhayisekile ngaphezulu ukuba ayiphazamisi nayiphi na imigangatho engaphezulu okanye umnyango wegaraji, njengoko zihlala zisebenzisa indawo enkulu engaphezulu.
Ukufumana ezinye izimvo ezinxulumene noko jonga eyethu Izimvo zombala womnyango wegaraji igalari apha.
kufuneka unxibe isuti emtshatweni
iilokhwe ezimnyama nezimhlophe zemitshato
ileyibhile ikhule idayimani yokuzibandakanya
izimvo zokuzalwa komyeni wam
igumbi lokulala elikhanyayo emdaka